ग्राण्डी अस्पताल जनमुखी र विश्वस्तरीय सेवा विस्तार गर्दै ……. – Asan Bazaar Patrika
ग्राण्डी अस्पताल जनमुखी र विश्वस्तरीय सेवा विस्तार गर्दै …….
प्रकाशित: १९ पुष २०७६, शनिबार
काठमाडौँ, १९ पुस । ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल टोखाले आर्थिक रुपमा विपन्न भएका व्यक्तिका स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर ४० वेडमा निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने भएको छ ।
अस्पतालको शुक्रबार साँझ सम्पन्न सातौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आर्थिक स्थित कमजोर भएकालाई सिद्धार्थ वार्ड स्थापना गरेर ४० वेडबाट निशुल्क सेवा दिन लागेको बताएको हो ।
अस्पतालका अध्यक्ष इन्जिनीयर दिपक कुँवरले ग्राण्डी अस्पतालले धनी र गरिब दुबै स्तरका नागरिकलाई सेवा दिने उदेश्यले ४० वेड निःशुल्क गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । “ग्राण्डी अस्पताल धनी व्यक्तिले उपचार गर्ने अस्पताल हो भन्ने आम मानिसको बुझाई छ, यसलाई चिर्नका लागि पनि हामीले ४० वेड निःशुल्क गर्न लागेको हौँ,”–अध्यक्ष कुँवरले भन्नुभयो ।
टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले अस्पतालले नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको सराहना गर्दै आगामी दिनमा थप जनमुखी र विश्वस्तरीय सेवा विस्तार गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । अस्पताललाई चाहिने स्थानीय सरकारको साथ र सहयोग दिन स्थानीय सरकार तयार रहेको उहाँको भनाई थियो ।
अस्पतालका निर्देशक डा चक्रराज पाण्डेले सात वर्षको अवधिमा अस्पतालले चार हजारभन्दा बढी विदेश, आठ लाख भन्दा बढी विरामीको बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवा, ५० हजार अन्तरङ्ग विरामी, ३० हजार सर्जरी, ४१ हजार आकस्मिक सेवा र तीन हजारको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी स्वास्थ्यसेवा प्रदान गरेको जानकारी दिनुभयो ।
अस्पतालले सातौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम तथा अस्पतालबाट प्रकाशित हुने दोस्रो ‘ग्राण्डी जर्नल’को समेत विमोचन गरेको छ ।